Git Sangit News » रोचक–रमाइलो
काठमाण्डौ । महिलाहरु सुन्दरताका धनी हुन्छन् । उनीहरुमा रहेको सौन्दर्यको तारिफ धेरैले गर्न चाहन्छन् जसबाट उनीहरु नै प्रफुल्लित हुन्छन् । अझ कसैले त महिलाको सुन्दरता नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो भनेर पनि अथ्र्याएका छन् । विवाहित महिला र अविवाहित महिलामा केही फरकपना पाउन सकिन्छ तर त्यो जान्न अलि नियालेर.....
एजेन्सी । संसारमा निकै अचम्म लाग्दा घटना सुन्न पाइन्छ । बेलायतकी एक जना पूर्वमोडलले गरेको हर्कतको अहिले चर्चा भइरहेको छ । ति पुर्व मोडलले २२१ जना केटासँगको प्रेम असफल भएपछि कुकुरसँग बिहे गरेकी छन् । इलिजावेथ होडले टेलिभिजन कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणमा आफूले पालेको कुकुरसँग विवाह गरिन् । ४९ बर्ष.....
एजेन्सी – दुई श्रीमती हुने पुरुषले नेपालमा ठूलो कानुनी झ’मेला बेहोर्नुपर्ने नयाँ कानुन बनिरहेका बेला संयुक्त अरब इमिरेट अर्थात् युएइमा भने सरकारले नै अतिरिक्त घरभाडा भत्ता दिने भएको छ । अविवाहित महिलाहरुको बढ्दो संख्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पुरुषहरुलाई दोश्रो बिहे गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्न.....
श्रीमान डेढ बर्षदेखि कोलकत्तामा काम गरिरहेका छन् । उनीहरुका डेढ बर्षिया छोरा पनि छन् । यसैबिच श्रीमती कसरी गर्भ’वती भइन् भनेर प्रश्न गरिनु सामान्य कुरा हो । याे घट’ना भारतको जगदीशपुरमा घटेको छ । भाउजु गर्भ’वती भएको थाहा पाएपछि नन्द पुलिसकोमा पुगेकी छिन् । उनले भाउजु ३ महिनादेखि गर्भ’वती भएको बताइन्.....
काठमाडौँ – नेपाली टिकटक कलाकारहरुलाई भारतीय सामाजिक सञ्जालमा फिनल्याण्डको नवनियुक्त मन्त्री भनेर प्रचार गरिएको छ । नेपाली टिकटकका चर्चित जुम्ल्याहा दिदीबहिनी प्रिन्सी र प्रिज्मा खतिवडा तथा दीपा र दमन्ता श्रेष्ठसँगै बसेको तस्वीरलाई भारतीयहरुले फेसबुक र ट्वीटरमा फिन्ल्याण्डको नवगठित मन्त्रीमण्डलका.....
एजेन्सी । दुनियामा फरक फरक मानिस छन् र सबैको शौक पनि फरक छ । यस्तै केही अनौठो शौक लिएर दक्षिण एसिया आउँदैछिन् पोल्याण्डकी एनिया । यी युवतीको लक्ष्य छ कि उनी एक लाख पुरुषसँग शा’रीरिक सम्बन्ध राख्नेछिन् । बल्ल २१ वर्षकी भइन् यी युवती – पोल्याण्डमा बस्दै आएकी २१ वर्षीया एनिया (Ania Lisewska)को चाहना अनौठो छ । अधिकांश.....
काठमाडौं, वैशाख १४ बहुप्रतीक्षित तथा फिल्म ‘दाल भात तरकारी’को नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । आज सो फिल्मको ‘एन्टिबायोटिक खाउँला’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको हो । निर्माण पक्षले जेठ २० गतेको प्रदर्शन मिति नजिकिँदै गर्दा नयाँ गीत सार्वजनिक गरेको हो । यो फिल्म मह सञ्चारको ब्यानरमा निर्माण भएको हो । सार्वजनिक.....
काठमाडौं, वैशाख १३ फिल्म ‘वीर विक्रम–२’ को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रम आयोजना गरी सो फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो । फिल्मको ट्रेलरमा अधिकांश कलाकारलाई देखाइउको छ । सो फिल्ममा पल शाह, वर्षा शिवाकोटी, नाजीर हुसेन र बुद्धि तामाङलगायतले मुख्य भूमिकामा काम गरेका.....
यो ‘गुलाबी हिरा’को मूल्य थाहा पाउँदा तपाईं जिब्रो टोक्नुहुन्छ !
६ फाल्गुन २०७५, सोमबार ०४:४६
बिबिसी, फागुन ६ हिरा बहुमूल्य धातुमा पर्छ । त्यसोभए कुनै हिराको मूल्य कतिसम्म पर्ला ? तर, यहाँ ज्यादै महँगो हिराबारे चर्चा गरिएको छ । एक दुर्लभ गुलाबी हिरा ५० मिलियन डलर अर्थात् (नेपाली ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ) मा खरिद–बिक्री भएको छ । जब कि, प्रतिक्यारेट मूल्यको हिसाबले यो हिराको मूल्य विश्वकै कीर्तिमानी.....
६ फाल्गुन २०७५, सोमबार ०४:२२
एजेन्सी, मंसिर १० भाडामा गर्लफ्रेन्ड पाइन्छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, यो यथार्थ हो । पश्चिमा देशहरूमा युवा–युवतीमा प्रेमी–प्रेमिकाप्रति बढ्दो आकर्षणलाई मध्यनजर गर्दै भाडामा गर्लफ्रेन्ड–ब्वाइफ्रेन्चडको सेवा दिन थालिएको छ । यो खबर हाम्रै छिमेकी देश चीनको हो । उक्त देशमा मात्रै २० रुपैयाँमा छानी–छानी.....